ရာသီလာနေချိန်မှာ လက်ဖက်စားလို့ရလား? - For her Myanmar
ရတယ်ထင်လား???? မရဘူးထင်လား??? ပြောကြည့်ကြည့် 😉
လူကြီးတွေ ပြောနေကျ ရာသီလာချိန်မလုပ်ရမယ့် အရာတွေ၊ ရှောင်ကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေ မနည်းမနောရှိပါတယ်။ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ အယူအဆတွေဟာ အလုံးစုံမှန်တယ်လို့ ပြောမရရင်တောင် အတော်များများက မှန်နေတတ်လို့ လက်ဆင့်ကမ်းကျင့်သုံးလာကြတာ မဟုတ်လား…
ညီမလေးတို့ ရာသီပန်းလေး စပွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ ညီမလေးရဲ့ မေမေတို့ ဘွားဘွားတို့က ယောင်းတို့ကို ” သမီး ရာသီလာချိန် ခေါင်းမလျှော်ရဘူးနော်” ” သမီး ရာသီလာချိန် လက်ဖက်မစားရဘူးနော်” စသည်ဖြင့် ပြောဆိုလေ့ ရှိကြတယ် ဟုတ်??? ဒီအပတ်မှာတော့ “ရာသီလာချိန် လက်ဖက်မစားရဘူး “ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောပြချင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ရာသီလာတဲ့ ကိစ္စပေါ့နော်… ရာသီလာတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးဟော်မုန်းတွေ စည်းချက်ညီညီ ကစားလို့ သားအိမ်နံရံ ထူနေရာကနေ ပါးပြီး သားအိမ်နံရံတွေ ပြိုကျ ကြွေကျရင်းနဲ့ ရာသီသွေးလို့ လူတိုင်းသိထားတဲ့ သားအိမ်အတွင်း တစ်ရှူးလေးတွေ မိန်းမကိုယ်ကနေ တစ်လတစ်ခါ ဆင်းလာတာမျိုးပါ။ ဒီလို ဆင်းဖို့အတွက် သားအိမ်ကလည်း အင်တိုက်အားတိုက် ညှစ်ချရပါတယ်။
Related Article >>> ရာသီလာတဲ့အခါ မလုပ်မဖြစ်လုပ်သင့်တဲ့ အရာ (၇) ခု
ကဲ လက်ဖက် ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော ??? လက်ဖက်ဆိုတာ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အတော်ကြိုက်တဲ့ အစားအစာပါ။ “အသီးမှာ သရက်။ အရွက်မှာ လက်ဖက်”လ်ု့တောင်ပြောကြတာဆိုတော့ တော်ရုံနာမည်ကြီးတဲ့ အစားအစာ မဟုတ်ဘူးနော်။
ဒါပေမဲ့ လက်ဖက်ဟာ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်မကောင်းတဲ့အထဲ ပါပါတယ်။ လက်ဖက်ရဲ့ သဘာဝကိုက ခန္ဓာကိုယ်မှာ စားတဲ့ သံဓာတ်တွေကို အူက မစုပ်အောင် နောက်တစ်မျိုး ပြောရမယ်ဆိုရင် စားသမျှ သွေးအားမဖြစ်အောင် တားတဲ့ အစားအစာတစ်မျိူးပါ။ ဒါကြောင့် သွေးအားနည်းရောဂါရှိသူတွေဆိုရင် လက်ဖက်ကို လုံးဝရှောင်ရတာပေါ့။
လက်ဖက်နဲ့ ရာသီ ဘယ်လို ဆက်စပ်နေလဲ?
တကယ်တော့ မိန်းကလေးတွေဟာ တစ်လတစ်ခါ သွေးအားတွေ ဆုံးရှုံးနေသူတွေပါ။ ဒါကြောင့်ပဲ သွေးအားကောင်းတဲ့ အစားအစာတွေကို ပိုစားပေးသင့်ပြီး သွေးအားနည်းစေတဲ့ အရာတွေကို အမြဲရှောင်သင့်ပါတယ်။
လက်ဖက်ဟာ သူ့သဘာဝအရကို သွေးအားနည်းစေတဲ့ အာနိသင်ရှိတာမို့ ရာသီလာချိန်မှ မဟူတ်ပါဘူး။ တတ်နိုင်သမျှ မိန်းကလေးတွေ မစားသင့်တဲ့အစားအစာ ၊ သွေးအားနည်းစေတဲ့အစားအစာပါ။ ဒါ့အပြင် လက်ဖက်ဟာ ရာသီလာစဉ် ကိုက်ခဲခြင်း ၊ စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်း ၊ မူးဝေခြင်းတို့ကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေးလူကြီးတွေက ရာသီလာချိန် လက်ဖက်မစားနဲ့လို လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြတာပါ။
တကယ်လို့များ ညီမလေးတို့က လက်ဖက်ကို အရမ်းကြိုက်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင် လက်ဖက်ကို လျှော့စားဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်…
မောပန်းလွယ်ခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး လက်ဖက်ကို လုံးဝရှောင်သင့်ပါတယ် ညီမလေးတို့ရေ…
လက်ဖက်အစား ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြုစေမယ့်
ရတယျထငျလား???? မရဘူးထငျလား??? ပွောကွညျ့ကွညျ့ 😉
လူကွီးတှေ ပွောနကြေ ရာသီလာခြိနျမလုပျရမယျ့ အရာတှေ၊ ရှောငျကိုရှောငျရမယျဆိုတဲ့ ကိစ်စတှေ မနညျးမနောရှိပါတယျ။ ရှေးလူကွီးတှရေဲ့ အယူအဆတှဟော အလုံးစုံမှနျတယျလို့ ပွောမရရငျတောငျ အတျောမြားမြားက မှနျနတေတျလို့ လကျဆငျ့ကမျးကငျြ့သုံးလာကွတာ မဟုတျလား…
ညီမလေးတို့ ရာသီပနျးလေး စပှငျ့ပွီဆိုတာနဲ့ ညီမလေးရဲ့ မမေတေို့ ဘှားဘှားတို့က ယောငျးတို့ကို ” သမီး ရာသီလာခြိနျ ခေါငျးမလြှျောရဘူးနျော” ” သမီး ရာသီလာခြိနျ လကျဖကျမစားရဘူးနျော” စသညျဖွငျ့ ပွောဆိုလေ့ ရှိကွတယျ ဟုတျ??? ဒီအပတျမှာတော့ “ရာသီလာခြိနျ လကျဖကျမစားရဘူး “ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ ပတျသကျလို့ ပွောပွခငျြပါတယျ။
ပထမဆုံး ရာသီလာတဲ့ ကိစ်စပေါ့နျော… ရာသီလာတယျဆိုတာ မိနျးကလေးဟျောမုနျးတှေ စညျးခကျြညီညီ ကစားလို့ သားအိမျနံရံ ထူနရောကနေ ပါးပွီး သားအိမျနံရံတှေ ပွိုကြ ကွှကေရြငျးနဲ့ ရာသီသှေးလို့ လူတိုငျးသိထားတဲ့ သားအိမျအတှငျး တဈရှူးလေးတှေ မိနျးမကိုယျကနေ တဈလတဈခါ ဆငျးလာတာမြိုးပါ။ ဒီလို ဆငျးဖို့အတှကျ သားအိမျကလညျး အငျတိုကျအားတိုကျ ညှဈခရြပါတယျ။
Related Article >>> ရာသီလာတဲ့အခါ မလုပျမဖွဈလုပျသငျ့တဲ့ အရာ (၇) ခု
ကဲ လကျဖကျ ဘကျကကွညျ့မယျဆိုရငျရော ??? လကျဖကျဆိုတာ မွနျမာမိနျးကလေးတှေ အတျောကွိုကျတဲ့ အစားအစာပါ။ “အသီးမှာ သရကျ။ အရှကျမှာ လကျဖကျ”လျု့တောငျပွောကွတာဆိုတော့ တျောရုံနာမညျကွီးတဲ့ အစားအစာ မဟုတျဘူးနျော။
ဒါပမေဲ့ လကျဖကျဟာ ကနျြးမာရေး ရှုထောငျ့ကကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ သိပျမကောငျးတဲ့အထဲ ပါပါတယျ။ လကျဖကျရဲ့ သဘာဝကိုက ခန်ဓာကိုယျမှာ စားတဲ့ သံဓာတျတှကေို အူက မစုပျအောငျ နောကျတဈမြိုး ပွောရမယျဆိုရငျ စားသမြှ သှေးအားမဖွဈအောငျ တားတဲ့ အစားအစာတဈမြိူးပါ။ ဒါကွောငျ့ သှေးအားနညျးရောဂါရှိသူတှဆေိုရငျ လကျဖကျကို လုံးဝရှောငျရတာပေါ့။
လကျဖကျနဲ့ ရာသီ ဘယျလို ဆကျစပျနလေဲ?
တကယျတော့ မိနျးကလေးတှဟော တဈလတဈခါ သှေးအားတှေ ဆုံးရှုံးနသေူတှပေါ။ ဒါကွောငျ့ပဲ သှေးအားကောငျးတဲ့ အစားအစာတှကေို ပိုစားပေးသငျ့ပွီး သှေးအားနညျးစတေဲ့ အရာတှကေို အမွဲရှောငျသငျ့ပါတယျ။
လကျဖကျဟာ သူ့သဘာဝအရကို သှေးအားနညျးစတေဲ့ အာနိသငျရှိတာမို့ ရာသီလာခြိနျမှ မဟူတျပါဘူး။ တတျနိုငျသမြှ မိနျးကလေးတှေ မစားသငျ့တဲ့အစားအစာ ၊ သှေးအားနညျးစတေဲ့အစားအစာပါ။ ဒါ့အပွငျ လကျဖကျဟာ ရာသီလာစဉျ ကိုကျခဲခွငျး ၊ စိတျမတညျမငွိမျဖွဈခွငျး ၊ မူးဝခွေငျးတို့ကို ပိုဆိုးစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရှေးလူကွီးတှကေ ရာသီလာခြိနျ လကျဖကျမစားနဲ့လို လကျဆငျ့ကမျးခဲ့ကွတာပါ။
တကယျလို့မြား ညီမလေးတို့က လကျဖကျကို အရမျးကွိုကျခဲ့တယျ ဆိုရငျတောငျ လကျဖကျကို လြှော့စားဖို့ အကွံပေးခငျြပါတယျနျော…
မောပနျးလှယျခွငျး စတဲ့ လက်ခဏာတှရှေိမယျဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျပွီး လကျဖကျကို လုံးဝရှောငျသငျ့ပါတယျ ညီမလေးတို့ရေ…
လကျဖကျအစား ရာသီလာတဲ့အခြိနျမှာ ခန်ဓာကိုယျကို အကြိုးပွုစမေယျ့
Tags: Health, Healthy, Menstruation, myth, Period, salad, Tea Leaves, Vegetables